Daryeelka degdegga ah: Marka xitaa isbeddelka togan uu dhab ahaantii adag yahay - Cunnooyinka ku socda wheels
Daryeelka Daryeelka ee 'Quicksand': Marka xitaa isbeddelka wanaagsan uu dhab ahaantii adag yahay
Sababtoo ah Cuntada Lugaha Laydhka ayaa ah ilo lagu qiimeeyo daryeel bixiyeyaasha, waxaan higsaneynaa inaan bixinno macluumaad ay daryeel-bixiyeyaashu u arki karaan inay faa'iido leeyihiin. Qoraalkani waa qayb ka mid ah taxane mararka qaarkood loo yaqaan "Daryeelka Daryeelka ee Quicksand," fiirin shakhsi ahaaneed oo ku saabsan inuu noqdo daryeel bixiye ay sameysay Agaasimaha Suuqgeynta Lauren Edstrom.
Runtii waa wax lala yaabo sida aan u wada dareemi karno gebi ahaanba hal daqiiqad, ka dibna aan u xuub siibno samatabbixin qof weyn oo dhab ah xiga. Subaxaan aniga oo ku sii jeeda shaqadeyda, waxaan dhageysanayay Allen Carr's The Way Way ee Joojinta Sigaarka Cabida, waxaan cabayaa 'Snapple' waxaanna sugayaa inaan dhammeeyo sandwich-ka saldhigga gaaska si aan u furo boqorkayga M & M's
Horay ayaan hooyaday ula hadlay laba jeer saaka, taas oo runtii ah tiro aad u wanaagsan. Shalay waxay laheyd maalin wanaagsan oo runti si dhib yarna ugama baahna wax kalsooni ah, sidaa darteed markaan saakay soo toosay, waxaan rajeynayey in laga yaabo inay iyaduna maanta wanaagsanaato. Nasiib darro markii aan ka jawaabayay taleefanka su’aasheedii ugu horreysay waxay ahayd “Sideen uga baxaa halkan?!” waana inaan mar kale, dib u wareegaa oo si tartiib ah u sharraxaa xaaladdeeda.
Saddex toddobaad ka hor, hooyaday waxay u guurtay guri cusub oo ku yaal meel kale oo magaalada ka mid ah. Guryahan sidoo kale wuxuu u dhacaa inuu haysto xoogaa gargaar ah dadka deggan, sidaas darteedna ka dhigaya dhisme nool oo caawimaad leh. In kasta oo aanan hubin inaan wax sax ah ku sameynayo iyada, haddana waan ogaa in iyadoo ku saleysan waxa ay awoodi karto iyo helitaanka halkaas ka jira, inay tahay inay u guurto meel dareemi doonta in ka badan “guriga xanaaneynta” ama ay liiska sugitaanka dhowr sano oo laga yaabo inaysan xitaa soo gelin dhismihii ay rajeyneysay.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan u sharaxay hooyaday wixii aan ka helay, iyo in maadaama ay cusub yihiin, ay awoodi karto inay doorato aqalkeeda. Qof kasta oo ay ku jiraan shaqaaluhu wuu cusbaa, sidaa darteed dhammaantood waxay la tacaalayaan isku mid qalooca waxbarasho. Aan ku xuso in dhismahani qurux badan yahay oo aqalkeedu u badan yahay aqalkii ugu fiicnaa ee ay soo martay nolosheeda oo dhan. Marka laga soo tago dhammaan waxyaabaha wanaagsan ee meeshan cusub ee qurxoon halkaas oo ay kaliya hoos ugu dhaadhacdo si ay wax u cunto markasta oo ay tahay waqtiga cuntada, weli waan hubin. Laakiin waan ogaa inay ka faa'iideysan doonto haddii qof agagaarkiisa ah oo dib u celin kara, u xaqiijin kara isla markaana ka dhigi kara inay dareento xasillooni markaan ka maqnayn. Waxyaabahan oo dhan waxay u maleynayeen inay ka baxayaan daryeeladayda, sidaa darteed waxaan diiradda saari karaa inaan la joogo hooyaday halkii aan ka maamuli lahaa. Wiil waan qaldamay.
In kasta oo ay ka hadlaysay guuritaankeeda marar badan oo horseed u ah maalinta xirxirashada ka dibna ay ku nooshahay sanduuqyo la buuxiyay oo ku yaal gurigeeda, haddana fikradda waxa dhacaya kaliya ma gujineynin. Maalintii guuritaanka, waxay bilowday inay yeelato waxoogaa baashaal ah inkasta oo jahwareerku jiro maxaa yeelay dad badan ayaa halkaas jooga oo isku dayaya inay meeshan ka dhigtaan mid u gaar ah, oo sida ugu macquulsan u yaqaan.
Booskeeda cusub, macno ahaan wax walba galabtii baa la furay. Sawirro iyo muraayadaha ayaa la suray meelahooda la midka ah. Qolkeedu wuxuu la mid ahaa sidii uu ahaan jiray - gogosha dharka la dhigto wax walbana waxay leeyihiin meel la mid ah meeshuu markii hore ku jiray. Midkoodna arrintaasi ma khusayn. Meeshani ma ahayn midkeedii mana fahmin sababta aan halkaas ugaga tegayo. Alaabta guriga, sawirrada, go'yaasha, dharka, waxba lama yaqaan, waxaana bilaabay inaan ogaado in tani aysan xitaa noqon doonin nus sida ugu fudud ee aan rajaynayay.
Saddex toddobaad ayaa laga joogaa markii taariikhda la dhaqaajiyay, waxaanan bartay waxyaabo aad muhiim u ah. In kasta oo hooyaday laga yaabo inay yeelato calaamado hore oo waallida, haddana waxaan u maleynayaa inay welwelkeedu ka badan yahay in lagu eedeeyo jahwareerkeeda qaarkood. Saaxiibteeda dhow ayaa sida ugu fiican ku tiri markii ay igu tiri "Qofna ma fileynin sida ay tan ugu adkaan doonto iyada". Waxay ku luntay dabaq kasta. Way ilaawday sida loo isticmaalo wiishka oo waxay riixday badhan kasta marki ugu horaysay ee albaabku furmo way ka degtaa oo ma lahan wado ay dib isugu celiso. Way tagtay oo waxay isku dayday inay gasho guryo aan iyadu lahayn, ugu dambayntiina waxay ka dhigaysaa deggane cusub inuu dareemo wax aan la fahmi karin. Waxay u naxariisatay shaqaalaha isku dayaya inay aad u bartaan iyada waxayna ku dadaashay inay edeb iyo saaxiibtinimo la yeelato dadka cusub ee aadka u jecel inay saaxiib la noqdaan.
Dhibaatada ay leedahay sameynta saaxiibo cusub ayaa ah iyada oo aan hada la tacaali karin hadal yar hada. Maskaxdeeda ayaa isku dayaysa inay aad uxasuusato wax walbo markastana xakameyso walaaceda marka qof u fadhiisto inuu la cunteeyo cashada oo weydiiyo meesha ay ka timid ama maxay jeceshahay inay sameyso, ma qabsan karto jawaab deg deg ah. Kadib waxay dareentaa xishood iyo nacasnimo wayna kacaysaa wayna baxaysaa dadkaasi waxay layaaban yihiin waxa ay khaldameen. Marnaba kuma fikirin inay taasi noqon doonto arrin weligood, maxaa yeelay had iyo jeer waxay ku fiicantahay sameynta saaxiibo.
Shaqaaluhu waxay ahaayeen kuwo waxtar badan oo naxariis badan, laakiin way cusub yihiin. Way cusub yihiin oo waligood weligood lama kulmin welwel ama halgan caafimaad oo maskaxeed sida hooyaday oo hadda la tacaaleysa waxayna isku dayayaan inay diiradda saaraan asaasaqa. In kasta oo aan ku raacsanahay inay dhibtoonayso iyo inay si cad u leedahay dhibaato xagga xusuusta ah, taasi maahan waxa hadda dhacaya. Hooyaday aad ayey ugu raaxeysaneysay oo waxay ku tiirsaneyd howlaheedii hore oo ay awood u yeelatay inay si madax-bannaan oo madax-bannaan ugu noolaato. Weli way waday iyada ilaa saddex toddobaad ka hor! Wax fikrad ah kama haynin sida ay ugu tiirsan tahay howshaas. Shaqaaluhu waxay iiga raadinayaan talo bixin, aniguna waan fiiriyaa iyaga. Waxaa jira waxyaabo aan u maleynayo inay la baranayaan hooyaday oo ka caawin doonta iyaga mustaqbalka, sida xoojinta wanaagsan, ansaxinta sida "Waan fahmi karaa sababta ay tani u tahay mid jahwareer leh" halkii ay ka ahaan lahayd "maya, waad jahwareersan tahay" . Waa inaan noqdaa u doodaha ugu weyn ee hooyaday, iyo inta udhaxeysa taleefannadeeda markay lumiso oo ay cabsato, iyo taleefannada dhismaha oo ay soo wacayaan inay ka walwalayaan iyada oo ay u maleynayaan inay tahay murashax daryeelka xusuusta hadda, meelna ma gaadhayo.
Haddii aad waligaa aragtay filimka “Jacayl dhab ah” oo leh dabeecadda Laura Linney ee ah sida ugu weyn ee walaalkeed ugu kalsoon yahay, waxaad ogtahay in iyadoon loo eegin waxa ay samaynayso markay taleefankeedu soo dhacayo, way qaadataa, nolosheeduna way joogsataa mar kasta oo waa in loo wareejiyaa . Asxaabteeda iyo qoyskeeda way hakadaan oo xoogaa ayey ka fogaataa. Kani waa noloshayda, taasi waa filimka fasaxa ee aan ugu jeclahay, oo runtii waxaan ahay qof ku dhex jira. Tani waxay ahayd wixii iigu adkaa ee aan abid sameeyo, badanaa maxaa yeelay waxay aad u xanuun badan tahay inaan maqlo hooyaday cabsi joogta ah iyo jahwareer waxayna i raadineysaa inaan imaado oo aan halkaas ka soo saaro. Waxaan ka jawaabayaa taleefanka ama xitaa waxaan u fasaxayaa inay fariin cod ah subax kasta 5:30 subaxnimo u soo jeeddo maxaa yeelay way soo jeeddaa waxayna ii baahan tahay inaan u sheego waxa xiga ee ay samaynayso. Waan ka daalay isku dayga nolosheyda, inaan reerkeyga u cadaalad sameeyo oo aan waqti ku qaato jahwareer la'aan, goobjoog u ahaado ciidaha iyo xaflada dhalashada wiilkeyga labaad, iyo sidoo kale inaan ka jawaabo 30 telefoon maalintii. Taasi waa tiro dhab ah, meelkasta oo aan ka helo 15 ilaa 30 wicitaan maalintiiba iyadoo kuxiran heerka walaaca. Way adagtahay in wax uun diirada la saaro inta taleefankaagu 30 jeer garaacayo, laakiin sidoo kale way adag tahay inaad ku raaxaysato nabad iyo xasillooni.
Waxaan sameynayaa wax walba oo aan awoodo, xitaa haddii taasi macnaheedu tahay inaan u oggolaado inay halkaas joogto oo booqashooyinka aan ka dhigo kuwo aan badnayn si ay ula qabsan karto booskeeda cusub. Xitaa haddii taasi macnaheedu tahay inay maqasho inay dareento inay xabsi ku jirto, mana garanayo waxa la sameeyo markaan doonayo inaan baxo oo aan cunteeyo qoyskeyga. Xitaa haddii taasi macnaheedu tahay inaan u oggolaado taleefankayga oo aan aamusiyo markay soo wacdo subaxa hore oo aan haysto fursad aan sariirta dib ugu noqdo. Xitaa haddii taasi macnaheedu tahay inaan u xaqiijiyo si la mid ah sida aan wiilkayga u sameeyo, oo aan u sheego sida aan ugu faraxsanahay iyada iyo sida ay u qabato shaqo weyn in kasta oo ay dhammaan tahay.
Waan baranayaa. Weligay sidan kamaan yeelin, oo runti kama jecli doono seddexdii toddobaad ee la soo dhaafay cadowgaygii ugu xumaa. Laakiin qalbigayga, waan ogahay inay nabad tahay, way quudatay oo qof baa jooga haddii ay runti caawimaad ugu baahan tahay daqiiqaddan - daqiiqadda aan iska heli karo waayo waxaan u baahanahay inaan taleefankayga dhigo meel aan fayoobay iyo caafimaad maskaxdayda ku jiro. . Tani waxay ahayd mid aad u adag. Waa wax lagu qoslo - mararka qaarkood markaan garan waayo waxa aan sameeyo oo aan doonayo in qof kale ii sheego, waxaan jeclaan lahaa inaan hooyaday u wici karo.